Sharukh Khan oo u jawaabay atoore waddan kale kasoo jeeda oo ka yaabsaday | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA Sharukh Khan oo u jawaabay atoore waddan kale kasoo jeeda oo ka...
Atoore u dhashay waddanka Indonesia ayaa billad loo guddoonsiiyay inuu ku guuleystay jilaaga ugu fiican dalkiisa waxa uu u hibeeyay atooraha caanka ah ee reer Hindiya, Sharukh Khan, sheekadan ayaana soo jiidatay xidigga shirkada filimada ee Bolywood-ka.
Muhammad Khan, oo ka hadlayay fagaarihii uu billadda ku hantay, oo dadweyne farabadan ay buuxeen, ayaa mahadcelin gaar ah siiyay Sharukh Khan, wuxuuna sheegay in jilaaga lagu naaneyso “boqorka bollywood” uu ahaa sababtii uu atooraha ku noqday.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahceliyo, atooraha kaliya ee aan taageero, Boqor Khan, Sharukh KhanRun ahaantii waxaad ahayd sababtii keentay inaan anigu ku fikiro inaan noqdo atoore. Markii aan 10 sano jir ahaa ayaan qaatay go’aankaas. Sidaas darteed, caawa waxaan jeclaan lahaa inaan abaalmarintan kula wadaago adiga, waxaana rajo ka qabaa inaan mar uun kula kulmo doono”.
Muhammad ayaa markaas ka dib hees hindi ah u qaaday Sharukh Khan, wuxuuna mararka qaar ku hadlayay luqadda Hindiga.
Kumannaan qof ayaa muuqaalkiisa ku baahiyay baraha bulshada, ilaa ugu dambeyn uu arkay Mr Khan.
“Aad baan ugu faraxsanahay guusha aad gaartay. Mar dhow ayaan kula kulmi doonaa. Noloshu kahuu wacnaato, siina wad dareenkaaga ku aaddan dhinaca jilliinka….& Waan u mahad celinayaa dhammaan dadkii isoo gaarsiiyay arrintan”, ayuu yiri Sharukh Khan oo qoraal iyo muuqaalka atoorahaas soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Xuquuqda Sawirka @iamsrk@IAMSRK
Maxaad u guursatay adigoo aad u da’ yar?
Ma aha markii ugu horreysay ee uu Sharukh Khan u jawaabo taageerayaashiisa aad ula dhacsan, kuwaasoo mararka qaar uu si toos ah ula kulmo, ama xaflado u qabto.
Bishii Maarso ee sanadkan, mid ka mid ah taageerayaasha ku taxan jilaagan ayaa su’aal la yaab lahayd weydiiyay Khan, isagoo meel fagaare ah ku sugan.
Lahaanshaha sawirkaHINDUSTAN TIMESImage captionSharukh Khan ayaa jawaab soo jiidasho leh ka bixiyay su’aashii cajiibka ahayd ee la weydiiyay
Hase yeeshe Shah Rukh ayaa ka bixiyay jawaab aad u soo jiidatay dadka.
“Walaal , jacayl iyo nasiib waxay wehel kula noqon karaan mar uun, marka laba da waxaan ka helay xaaskayga Gauri”, ayuu yiri Shah Rukh..
Previous articleSAWIRO:Madaxweynaha K/Galbeed oo qaabiley Wakiilka QM ee Somalia & Ajandaha kulanka labada dhinac
Next articleBaarlamaanka Puntland oo xasaanada ka qaaday C/Xakiin Dhoobo-Daareed
XOG CUSUB: Wasiirro ka tirsanaa Somaliland oo soo gaaray Muqdisho, Ogow Ujeedka?
Dil ka dhacay degaan ka tirsan Puntland & xiisad Saakay ka taagan
In ka badan 100-qof oo ku dhimatay Biyo xireen soo dumay (Daawo Sawirada)
DHAGEYSO: War aan lagu farxin oo kasoo kordhay Muqdisho Xili Qaraxyada Shabaab…
DAAWO:Soomaalida Mareekanka oo sameeyay ficil siweyn u hadal hayaan warbaahinta Seattle
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Iyo Wasiirka Qorsheynta DFS Oo Kulan Yeeshay
Madaxweyne Farmaajo & Fahad Yaasiin Oo Ku Heshiiyay In La Afgambiyo Axmed Madoobe